Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Gudiga Maamulka Xeryaha Qaxootiga ee Caadiga Ahaa oo Qabsoomay.
Maalin nimadii shalay oo Khamiis ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 21/10/2015 waxaa xerada qoxootiga Ifo ee deegaanka Dhadhaab ka qabsoomay shirkii faracyada Dhadhaab iyo Faafi ee dhici jiray labadii biloodba mar.
Shirkan oo ahaa mid si joogta ah ay ugu kulmaan maamulada faracyada xeryaha qoxootiga kahowl gala ayaa ah shir muhiim ah oo kor loogu qaado howlaha halganka ee deegaanadan kasocda waxaana lagaga hortagaa caqabadaha iyo hagar daamooyinka uu cadawgu maleego ee ku wajahan guud ahaan shabka Soomaalida Ogadenia.
Ugu horaynba shirka ayaa furmay abaare 9:00 subaxnimo xiliga Dhadhaab waxaana sidii caadada ahaydba lagu furay ayaado kamid ah Qur’aanka kariimka ah wuxuuna shir gudoonku uruuriyay qodobadii ay ergooyinku lasoo shirtageen iyadoo diiwaanka lagu qoray qodobada la isla qaatay
in maanta laga hadlo.
Shirkan oo socday saacado badan ayaa lagaga hadlay qodobo badan ooy kamid yihiin:-
In latayeeyo maamulada faracyada si loogaadho hadafka aan higsanayno.
In ladhiso gudiyo abaabul oo kahowl gala sadexda xero qoxooti ee Dhadhaab iyo Faafi si bulshada loogu carbiyo hayaanka dheer ee lagu jiro.
In si mid ah looga hortago khataraha iyo faldambi yeedyada uu gumaysigu maleegayo si ay shacabka ree ogadenia ugu dhacaan.
In la abuuro ilo dhaqaale oo laysku halayn karo si loodaboolo baahiyaadka dhaqaale ee halganka ku aadan.
In si wada jir ah looga hortago waxkastoo keeni kara khilaaf iyo kala qaybsanaan si aan midnimo ugu hanano guusha aan Allaah karajaynayno.
Qodobadan iyo qaar kaloo badan ayaa laga dooday la iskuna afgartay waxayna si hufan gudiyada uga doodeen wixii qabsoomay qodobadii la isku waafaqay kal fadhigii hore ee gudiyada.
Guntii iyo gunaanadkii kulankii maamulada xeryaha oo mudo dheer socday ayaa sinabad ah kusoo gaba gaboobay waxaana kasoo baxay qodobo dhaxal gal ah.